Lynda ANDRIATSITONTA réseaux mobiles	0 Commentaire juin 2, 2018
Lavitry ny kitay ny afo. Tsy afaka mifandray an-telefonina amin’ny olona mpietraka ao amin’ny kaominina Tanamary, distrikan’i Beroroha, faritra Atsimo- Andrefana. Nambaran’ny ben’ny tanàna, Honoré Herimanana fa tsy mbola misy “réseaux mobiles” any amin’ny kaominina tantanany. Anisany faritra mena hanjakan’ny asan-dahalo ny kaominina Tanamary. Tsy afaka hiantso mpitandro filaminana mihitsy ny mponina satria ny “réseau” aza tsy misy. Manoloana izany, manao antso ny tomponandraikitra isan-tsokaijny ny tenany hamaha ny olana ara-pifandraisana.
Ankoatra izany, mbola tsy misy foto- drafitr’asa mihitsy ao Tanamary. “Kaominina vaovao ihany i Tanamary. Ny taona 2004 izy no lasa kaominina. Tsy mbola misy ny sekoly, hopitaly, tsena”, hoy ny ben’ny tanàna. Nanatrika ny hetsika nataon’ny vondrona parlemantera maro an’isa teny amin’ny kianjan’i Coliseum Antsonjombe ity ben’ny tanàna ity. Nilaza izy fa manohana ny fitondram-panjakana. Manoloana ny tsy fisian’ny foto-drafitr’asa ao amin’ny kaominina misy azy, manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana tohanany izy mba hijery akaiky ny lafiny fampandrosoana ao Tanamary.
‹ FIFANINANA NASIONALY “SLAM POEZIA”: Ady amin’ny herisetra mahazo ny ankizy	› FAMPANAJÀNA NY ZON’OLOMBELONA: Notolorana boky kely ny polisim-pirenena